Nutrition and Healthy Eating for Children Tickets, Mon 28/06/2021 at 10:00 am | Eventbrite
Nutrition and Healthy Eating for Children
by Maribyrnong City Council Early Years
Thank you for your interest. Ticket sales have ended for Nutrition and Healthy Eating for Children. For more information on future events go https://www.maribyrnong.vic.gov.au/Events
Nutrition and Healthy Eating for Children ကလေးများအတွက် အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသောက်မှု
Burmese families with children aged 3-5 years are invited to join us forafree online session about healthy eating for young children. The session will include up to date information on Australian Dietary Guidelines for healthy eating and how to make culturally informed, healthy food choices for kindergarten/school lunches, and practical ideas to involve children in choosing and preparing healthy packed lunches/snacks. There will be time for questions, and resources for you to use at home. This session is being delivered in partnership with the Multicultural Centre for Women’s Health. The session will be presented in Burmese with both English and Burmese translation in the Power Point presentation.
အသက်3နှစ်မှ5နှစ်ရှိ ကလေးများရှိသော မြန်မာမိသားစုများကို ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ စားသောက်ခြင်းအကြောင်း အခမဲ့သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဤသင်တန်းတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ စားသောက်ရန် ဩစတြေးလျ အစာအာဟာရဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များမှ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လျော်ညီသည့် ဗဟုသုတရှိပြီး မူကြို/ကျောင်း နေ့လယ်စာများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာ ရွေးချယ်နည်းများနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် နေ့လယ်စာ/မုန့်များ ရွေးချယ်၊ ပြင်ဆင်၊ ထုပ်ပိုးရာတွင် ကလေးများ ပါဝင်လာစေရန် လက်တွေ့ကျသော အကြံဉာဏ်များ ပေးသွားပါမည်။ မေးခွန်းမေးချိန် ထားပေးမည် ဖြစ်ပြီး အိမ်တွင် အသုံးပြုရန် အရင်းအမြစ်များကို သင့်အား ပေးပါမည်။ ဤသင်တန်းကို အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးအတွက် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ စင်တာနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပို့ချခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသင်တန်းကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် တင်ပြပြီး
Power Point တွင် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် တင်ဆက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Australia Events Victoria Events Things to do in Braybrook, Australia
Organiser Maribyrnong City Council Early Years
Organiser of Nutrition and Healthy Eating for Children
Nutrition and Healthy Eating for Children at Braybrook Community Hub
Maribyrnong City Council Early Years
Oz Harvest Nutrition Education & Skills Training - Greenvale
Oz Harvest Nutrition Education & Skills Training - Kalkallo
Kalkallo Community Centre, Melbourne
Oz Harvest Nutrition Education & Skills Training - Aitken Hill
Aitken Hill Community Centre, Craigieburn
Thu., 24 Mar. 6:30 pm
Soothing the Stress: Helping Children with Anxiety in Early Education
bestchance Truganina, Truganina
Tue., 22 Mar. 6:30 pm
bestchance Glen Waverley, Glen Waverley
Supporting Children with Challenging Behaviours in Early Education Settings
Collingwood Children's Farm - School Excursion - single class
$682.32 - $909.47
Collingwood Children's Farm - School Excursion -2or3classes